1917 ၏ရုရှားတော်လှန်ရေး: အစောပိုင်းပုန်ကန်
အဆိုပါ '' ရုရှားတော်လှန်ရေး 1917 ၏ '' ကမ္ဘာကြီးသမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးဖြစ်ရပ်များထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကမ္ဘာ၏လူဦးရေရဲ့သုံးပုံတပုံကနေဆင်းသက်လာပြည်နယ်များရှိခဲ့ပါသည်, ထိုသို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏ရလဒ်ကိုထိခိုက်လျက်, စစ်အေးခေတ် နောက်တော်သို့လိုက်ရာ။ ဒါပေမဲ့ဒီ Titanic ပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်. အရာအခြို့အပြောင်-လူသိများကြသည်။ 1917 ၏တော်လှန်ရေးမဟုတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်ရပ်အဖြစ်ပေမယ့်တော်လှန်ရေးတခုကွင်းဆက်, အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အနေဖြင့်အချို့သောလူထုကိုအဖြစ်၏အကောင်းဆုံးအတွေးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကမဟုတ်ခဲ့ Bolshevik -imposed, မလွှဲမရှောင်တော်လှန်ရေး; အစားကြောင့်အဓိကအားတစ်လစ်ဘရယ်များနှင့်ဆိုရှယ်လစ်တော်လှန်ရေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုလမ်းနှင့်ကြောင်းဆွဲဒေသခံအကျိုးစီးပွားအားဖြင့်ကျွေးမွေးအများအပြား options နဲ့အများကြီးလမ်းကြောင်းများ, ရှိခဲ့သည်။ ရုရှားတော်လှန်ရေးမှာလည်းမြင့်မားသော FARC ကြောက်မက်ဘွယ်သောအဖြစ်ဆိုး၏အချိန်လေးရှိသည်။ တော်လှန်ရေးများအတွက်အကြောင်းပြချက်ပြန်လယ်ပိုင်းကိုးရာစုသို့သွားပါ။
1871 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးအစာခေါင်းပါးသောအခါရုရှားတွင်စတင်ခဲ့သည်။ ဥရောပအနောက်တိုင်းပြည်ထက်ပိုကြီးတဲ့ဧရိယာမိုဃ်းမရွာမည်ပြုသကဲ့သို့ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နှင့်စပါးရိတ်ရာကာလဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်။ ရောဂါနောက်တော်သို့လိုက်နှင့်သန်းတစ်နှစ်ခွဲကျော်ကလူဒါဟာဘေးအန္တရာယ်ခဲ့ 1872. ၏အဆုံးအားဖြင့်သူတို့ရဲ့သင်္ချိုင်းမှထွက်သွား, လူတွေ, ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကလူသေခံတော်မူ၏။ အစိုးရ, ကံမကောင်း, စာရွက်စာတမ်းအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လွန်းနှေးကွေးလွန်းနှေးကွေးခဲ့, နှင့်အခွအေနေကုစားဖို့နားလည်မှုအတွက်လွန်းနှေးကွေးခြင်းနှင့်အမုန်းတစ်တွင်းနက်အစိုးရကိုယုံအဆိုပါငတ်တောင်သူလယ်သမားများ၏အကြားဖွင့်ဖွင့်လှစ်ပိုက်ဆံ, စာရင်းဇယား, ငွေ, အတိုက်အခံများနှင့်အတူသိပ်အစွဲအလမ်းခဲ့သည် ကူညီငွေ။
အဘယ်ကြောင့်ပိုက်ဆံ? လူတို့အဘို့တိုင်းပြည်၌စပါးကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသီးနှံတင်ပို့မှုအပေါ်တစ်ဦးကတားမြစ်ပိတ်ပင်မှု, အချိန်ရောင်းသူထက်ပိုအမြတ်အစွန်းဒေသခံကျယ်ပြန့်သောပမာဏကိုစေလွှတ်ခဲ့သောအသုံးပြုပုံစုစည်းဖို့တစ်လယူ (ဆိုလိုသည်မှာမဟုတ်ရုရှားက။ ) အစိုးရအနေတဲ့များ၏ပြောနေတာကနေသတင်းစာများတားမြစ်ထားခဲ့သည် တစ်ဦးကသာဆွေးနွေးခွင့်ပြုအစာခေါင်းပါးသောအခါ, "မကောင်းတဲ့စပါးရိတ်ရာကာလ။ "
အစိုးရကထို့နောက်အတွက် ပေး. အကူအညီများပေးပို့နိုင်ရန်အများပြည်သူကယ်ဆယ်ရေးစခန်းအုပ်စုများဖွဲ့စည်းသူတို့အဘို့အရှာဖွေနေ, ကူညီဖို့ရန်အလယ်တန်းနှင့်အထက်အတန်းအစားအပေါ်ကိုပဌနာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
အဆိုပါ zemstvos အစားအစာ, ဆေးရုံများနှင့်စစ်သုံးအိုးခွက်စည်းရုံးရေးနှင့်ငွေထောက်ပံ့, လမ်းဦးဆောင်ခဲ့သည်။ သူတို့ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးကူညီရန်ဖွဲ့စည်းအဖြစ်ဒါပေမယ့်သူတို့နှင့်နိုင်ငံရေးအရလိမ့်မယ်နိုင်ကြောင်းအသစ်တစ်ခုကွန်ယက်ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ Zemstvo အဖွဲ့ဝင်များကသူတို့နားမလည်ခဲ့ဘူးတောင်သူလယ်သမားများထက်ချွတ်ပိုကောင်းဖြစ်ခြင်းမှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့မောင်းနှင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကယင်း၏ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အစိုးရအပေါ်ဝိုင်းတဲ့သူဒဏ္ဍာရီစာရေးဆရာတော်စတွိုင်းအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး, တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါရလဒ်ကြောင့်ဆန့်ကျင်သောနိုင်ငံရေးထောက်ခံမှုများအသစ်များကိုကွန်ရက်များနှင့်တကွ, အစိုးရဆန့်ကျင်သတ်မှတ်ထားတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ မွတ်သိပ်ခြင်းဘေးများ၏တောင်းဆိုချက်များကိုလျော့နည်းသွားသကဲ့သို့, လူ့အဖွဲ့အစည်းအတိတ်သို့မပြန်ခဲ့ပါဘူး။ အစိုးရကိုမှာစိတ်ပျက်လူတိုင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက် it- ကအသံတစ်ဦးဟုပြောဆိုချင်တယ်။ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများစတင်ခဲ့: ပိုပြီးအစာခေါင်းပါးသောအခါပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်နှင့်ရပ်တန့်ဖို့ဘယ်လောက်။
အဆိုပါ Tsar အတိုက်အခံများ၏နယူးနည်းလမ်းများ
ဆိုရှယ်လစ်အသစ် Chernov အောက်မှာ created ဆိုရှယ်လစ်တော်လှန်ရေးပါတီ (SRS) အပါအဝင်အတွေးအမျိုးမျိုး strands နှင့်အတူကိုအလွန်အကျိုးအမြတ်။ မာ့က်စ, အမည်ခံအလယ်ခေတ်ဒုက္ခ၏အနှစ်တစ်သိပ္ပံနည်းကျတုံ့ပြန်မှုရှင်းပြချက်နှင့်အဖြေရှိခြင်းအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။ လီနင်တောင်ကူးပြောင်း။ ရုရှားလူ့အဖွဲ့အစည်း tsar တစ်ခုအတိုက်အခံဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်, ရုရှား၏အများပြည်သူဝိညာဏ်တီထွင်ခဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်ခဲ့သညျ။ အခုတော့နိုးခဲ့သည်။ လူအပေါင်းတို့သည်အများပြည်သူအဖြစ်တိုးမြှင့်ပညာရေး, သတင်းစာပညာ, ဆွေးနွေးမှုအုပ်စုများအသစ်တစ်ခုကိုအသက်အရွယ်မအလယ်ခေတ် Tsar ကနေနိုင်ငံရေးစကားသံကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Zemstvo ဒီဖှံ့ဖွိုးတိုးတဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ပြုမူဖို့ဆန္ဒရှိ, ရှေ့ဆက်စဉ်းစားတွေးခေါ်ဆင်းသက်, သူတို့ကလည်းဖြုတ်ချပေမယ့်ဆန့်ကျင်ဘဲ, အနည်းငယ်ကသူတို့လမ်းတင်နိုင်ရန်အတွက်အစိုးရလိုသူသက်ဦးဆံပိုင်ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်အစိုးရက Zemstvos ရည်ရွယ်နှင့်ပဋိပက္ခတက် setting, သူတို့ကိုကန့်သတ်ခြင်းနှင့်လျှော့ချရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ အမျိုးသားရေးပရိသတ်အဘို့ဖုန်းခေါ်လာ၏။ အဆိုပါ zemstvos လယ်ယာမြေအခွင့်အရေးကိုကာကွယ်နှင့်အစိုးရနှင့်အားဖြင့်ဆန့်ကျင်သို့တွန်းအားပေးခဲ့ကြသည်ချင်တယ်။ ကျောင်းသားများအမြဲတော်လှန်ရေးတစ်ဦး core ကိုဖူးကို၎င်း, Tsar ဆန့်ကျင်၏အရှေ့ဘက်မှာ ရှိ. , အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကျောင်းသားချီတက်ပွဲအင်အားနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်ခဲ့သည်။ ဆိုရှယ်လစ်အုပ်စုများနံပါတ်များအတွက်ကျပ်ပါဘဲ။
ထို့နောက်ရုရှားကဂျပန်နှင့်အတူစစ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ရထားလမ်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်အဖြစ်ရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့နယ်ချဲ့ဂျပန်တို့၏ဘုံသို့, အနောက်ဘက်တိုးချဲ့ခဲ့သညျ။ အဆိုပါ Tsar တစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးစီးပွားယူပြီး, အပေးအယူပယ်ချခဲ့ခြင်းနှင့်အာရှတစ်ဦးအတုံးကိုယူမှဂျပန်နှင့်အတူစစ်အနိုင်ရဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
အဆိုပါဂျပန် 1904 ခုနှစ်တွင်တိုက်ခိုက်ခဲ့နှင့်ရုရှားရလဒ်ကသူတို့ရဲ့မျက်နှာသာအတွက် Pre-စီရင်ထင်ခဲ့တယ်။ သူတို့ကလူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းနှင့်ဧကရာဇ်ခဲ့ကြသည်။ လစ်ဘရယ်လူ့အဖွဲ့အစည်းကရုရှားက "အဝါရောင်ယောက်ျား။ " ဒီ zemstvos ကနေဥရောပကိုခုခံကာကှယျထောကျပံ့ပေးကြပါတယ်, မင်းသား Lvov အောက်မှာကူညီရန်မြင့်တက်နှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတပ်မဟာဖွဲ့စည်းရန်နှင့် Tsar ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်စစ်တပ်ညံ့ဖျင်းတဲ့ 6000 မိုင်ထောက်ပံ့ရေးလိုင်းပေါ် reequipped နှင့် Idiots တို့ကမှာထားတော်မူခဲ့သည်။ အဆိုပါစစ်ဆိုးဆိုးရွားရွားသွားလေ၏။ လစ်ဘရယ်အမျက်ဒေါသကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ ဆိုရှယ်လစ်အတိုက်အခံနီးပါးလူကြိုက်များ, ပုံမှန်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ်။ ပြည်သူ့အစိုးရဝန်ကြီးများ၏လူသတ်မှုဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ လစ်ဘရယ်အမျိုးသားရေး zemstvo ပရိသချင်ခဲ့တယ်။
တစ်ဦးကလစ်ဘရယ်အစိုးရက၏စိတ်နှလုံးမှာအသတ်ခံအာဏာရှင်၏အရပျကို ယူ. မျှော်လင့်ချက်ယောက်ျားသည်အလယ်အလတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ Tsar ဆွဲဆောင်နိုင်ထမြောက်ကြသည်။ အဆိုပါ tsar ဘာမှငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ အမျက်ဒေါသကြီးပွားသတည်း။ ဤအမှုအပေါ်ဖိ, လူသစ်ကို၎င်း zemstvos တွေ့ဆုံရန်နှင့်တောင်းဆိုမှုများကိုတက်ဆွဲရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ Lvov ဒီအကြီးစား zemstvo ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်လူကိုယ်စားလှယ်စည်းဝေးပွဲကိုရဲ့ start ကျင်းပခဲ့သည်။ လစ်ဘရယ်ရုရှားကကိုဖြတ်ပြီး, အမျိုးသားရေးပရိသတ်အဘို့တောင်းဆိုချက်များကိုစီး။ အဆိုပါ Tsar အစည်းအဝေးကနေသူ့ကိုမှပေးအပ်သည့်တောင်းဆိုမှုများမှာကြည့်ရှုလျက်, စည်းဝေးပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီးအရာအားလုံးကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ထိုအရပ်၌များစွာသောဝက်အစီအမံခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်အဓိကသွားကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်တစ်ဦးတော်လှန်ရေးစတင်ခဲ့သည်။
ချားလ်စ် Stewart က Parnell
အိုင်ယာလန်ဒံယလေသ O'Connell, လစ်ဘရယ်
ကက်သရင်းမဟာ၏မရဏ: အမြင်း Myth ဟာ Debunking
အဆိုပါ Yongle ဧကရာဇ် Zhu Di
ဘယ်လို Attila သည့်ဟွန် Die ခဲ့သလား
Vlad အဆိုပါ Impaler / Vlad III ကို Dracula / Vlad Tepes
Corazon Aquino ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို
6 ထိပ်တန်း Atticus Finch Harper ကို Lee ကက Mockingbird Kill ရန်ကိုးကား
ရေထဲကဖလိုရို Get လုပ်နည်း
တစ်ဦးက Character ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းရေးထားလုပ်နည်း
ရီပတ်ဘလီကန်ရောမမြို့ Timeline ကို
Hip-Hop အတွက် Authenticity ၏နယူးစည်းကမ်းများ
ရှေ့သို့တိုးတက်မှု - ဘောလုံးပြိုင်ပွဲဝေါဟာရအကြောင်း
အဆိုပါ Elgin စကျင်ကျောက် / Parthenon ပန်းပု
ဂြာမနျတွင် '' Bitte '' ၏အတော်များများကဆိုလို
ဂျပန်နှုတ်ကပတ်တော်ကို "Sabishii" ၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်အင်္ဂလိပ်
Angstroms မှ nanometer converting
လက်တင် Conjunction ၏စာရင်း
နျလေ့လာဟာ Off Ward မှတစ်ဦးကဆုတောင်းပွဲ
Monsters နှင့် Cryptids ၏စစ်မှန်သောပုံပြင်များ
ခုနစ်ရာစုအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်အဆိုတော်များ: Renaissance နှင့်ဘားရို့
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီး: Fredericksburg ၏တိုက်ပွဲ
အဖွဲ့များကြားတွင်သို့မဟုတ် Sorority ်ထမ်းခေါ်ယူမှုစဉ်အတွင်းမေးပါရန်မေးခွန်းလွှာ